Wixii aragti ah itimaalka dhamaystiran oo pachinko
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Wixii aragti ah itimaalka dhamaystiran oo pachinko
Waxaad tahay, sida ay u xaqiijin hit weyn ee pachinko gudaha, waxaan u malaynayaa in inta badan kuwa ku dhuftay oo aan aad u badan fekerayo. Mashiinka Pachinko, kaas oo markaas ku rakiban in qowladda pachinko yahay, waxaan oo dhan waa Ghanna bakhtiyaa in hab la mid ah bakhtiyaanasiibka.
Tani, waxay noqdaan kuwo ku xiran dhacdooyinka in industry ee, mashiinka pachinko in aanu ma ilaaliyo, iyada oo qasab ah iyada oo loo marayo iskaashiga waa urur inaad kormeerto oo dhan mishiinka pachinko, ma awoodi doonaan in ay iska iibiso. Iyo hab bakhtiyaa-go'an, oo ka hadlaya wixii, aad hab bakhtiyaa habka itimaalka buuxa.
The xisaab, ayaa la sheegay in tijaabooyin madax banaan. Waayo, bakhtiyaa Ghanna in pachinko
ah, waxaa jira heshiiska in uu yahay in ay si buuxda u bakhtiyaa nasiib ah. In, nidaamka heerka itimaalka dhamaystiran random dhamaystiran, nooca nidaamka bakhtiyaa in uu si kooban u soo bandhigo.
iyo habkan itimaalka dhamaystiran, hal mar hal mar bakhtiyaa madax bannaan yahay, waa hab bakhtiyaa in aysan saameyn ku yeelan natiijada la soo dhaafay iyo wixii la mid ah. Waa adag tahay in wax yar la fahmo, laakiin, tusaale ahaan, waxaa jira kubada ka mid ah casaan iyo buluug iyo caddaan.
bilaabaan ilaa kubada galo, saddex kubadaha bakhtiyaa hareeraha yar yihiin by roulette yar. Haddii cas yahay Waxa uu yahay kubada ee hit ah, xilligan soo jeestay sawirka ku jira kubadaha pachinko ay u bilaabaan, joojin roulette ah, waxa uu noqonayaa mid hit weyn loo ogaado haddii ay jiraan cas-kubad oo duurka ku ah halkii ay.
Oo haddii kubada cad halkan waa, laakiin aad dabcan ayaa seegi doona haddii riday hit column of roulette, habka itimaalka dheregtaan, tan iyo markii aan la saameeyay natiijada la soo dhaafay, mar kasta oo tan iyo bilowgii laabto Matamoto, bakhtiyaa isla shuruudaha waxaa la fuliyay.
in gebi random, waxay noqotaa nooc ka mid ah wax waa bakhtiyaa madax banaan mar mar, taasi waa waxa habkan in jaaniska buuxa. Sidaas, marka aad aragti odhan, 1000 jeer wax Hama waa, 2000 wax jeer Hama, laakiin ma lahaa in ay mar isku shaandheyn, barbaro xaaladda waa isku mid, waxay noqon doontaa oo kaliya xaqiiqada ah in nasiib.
Si kastaba ha ahaatee mashiinka waxaa, Waxaa isku dayo in uu isugu in jaaniska Ghanna kala. Sidaa darteed, mishiinka haddii aad raacdo waa cidda Khasaartay in ay isku dayaan in ay caabudina ku dhuftay. Taasi waa wixii la sheegay in la ruxruxo ee Ghanna ah, kaas oo sidoo kale sheegay in jidadka. mustaqbalka
in la saadaaliyo, maxaa yeelay, jiidaya Ghanna ah, laakiin aad eegto habka qabashada fiican, tani waa dhibaatada. Eeg natiijooyinka la soo dhaafay ee Ghanna ah, arki karin la ruxruxo of xoog leh oo xanaaqsan noqon doontaa, laakiin bakhtiyaa Ghanna ah waa la fuliyay oo kaliya baxay at random.
xitaa cidhiidhi ah ilaa xad waqti, sida xaqiiqada ah, xaqiiqada ah in guushii haddii ujeedadoodu tahay waqti ay tani tahay, yaa in aan la saadaalin karin, sida in ay sidoo kale pachinko. Tan iyo
Hanemono waa dukaan yar aad leedahay a Horukon sida mashiinka CR, laga yaabaa in aad rabto in aad ogaato waa in bakhtiyaanasiibka itimaalka buuxa. In the case of dukaamada in la kala duwanaayeen doonaa jaaniska ah Ghanna ee Horukon, laakiinse hubaal waxaa jira gebi ahaanba itimaalka, laakiin waa inaad saamaynta aan caadi ahayn.